Ndingaqiniseka njani ukuba ndakufa ndakuya ezulwini?
Umbuzo: Ndingaqiniseka njani ukuba ndakufa ndakuya ezulwini?
Impendulo: Ingaba uyazi na ukuba unobomi obungunaphakade yaye uyakuya ezulwini wakufa? UThixo ufuna ukuba uqiniseke! Ibhayibhile ithi "Ndinibhalele ezizinto nina nikholwayo kwigama loNyaka kaThixo ukuze nazi ukuba ninobomi ubungunaphakade" (1 Yohane 5:13). Cinga ngokuba umi phambi koThixo ngoku kwaye uyakubuza ukuba "Kutheni efanele akuvumele ungene eZulwini?" Ubuya kuthini? Usenokungazi ukuba mawuthini. Into ekufuneka niyazi kukuba uThixo uyasithanda yaye usinike indlela yokuba sazi qinisekileyo apho siyakuba khona naphakade. Ibhayibhile ithi: "Wenjenje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi ude wancama uNyana wakhe okuphela kwamzeleyo ukuze bonke abakholwayo kuye bangatshabalali, koko babe nobomi obungunaphakade" (Johane 3:16).